राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बीच सम्झौता ~ Banking Khabar
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बीच सम्झौता
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा बिहिबार सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता पछि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा आवद्ध रहेका उद्यमीहरुलाई महासंघको सिफारिसमा बैंकले नियमानुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत सहुलियत दरमा कर्जा लगानी गर्ने छ ।
समारोहमा बैंंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले सम्झौता पश्चात देशमा उद्यमशीलताको प्रशस्त विकास भई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा थप सघाउ पुगी रोजगारी श्रृजना समेत हुने बताए । श्रेष्ठले बैंकको ७ प्रदेश ७७ वटै जिल्लामा रहेको २२१ वटै शाखा कार्यालयहरुबाट यो कर्जा लिन सकिने जानकारी दिए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले बैंकसंगको यो सहकार्यले घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको वित्तीय पंहुचमा थप सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले महासंघमा हाल ३५ हजार उद्यमी साधारण सदस्य रहेको र महासंघको सिफारिस बमोजिम लगानी भएको कर्जामा संस्थागत जमानत समेत रहने हुंदा कर्जा असुलीमा महासंघको पनि नैतिक दायित्व रहने बताए ।
मर्जरको तयारीमा आठ बीमा कम्पनीहरू
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्समा रोजगारीको अवसर, स्थानीयलाई प्राथमिकता
कति आम्दानी हुने व्यक्तिले कति तिनुपर्छ कर ?
हिमालयन बैंकको ग्रामिण भेगका विद्यार्थीहरुलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बैंकिङ क्षेत्रलाई फर्केर हेर्दा
पूर्व गभर्नर डा. तिलक बहादुर रावल भन्छन्, मर्जर आवश्यक छ, तर….
‘बीग मर्जरलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्छ’, देवेन्द्रप्रताप शाहको विचार
प्रोग्रेशिभ फाइनान्समा नयाँ संचालक समिति, अध्यक्षमा पुनः महर्जन
Email: News:- bankingkhabar72@gmail.com Contact-: 01-5706402
Marketing:- bankingkhabaradv@gmail.com Contact-: 01-5705163